Kungani Zetar - Zetar Imboni Co., Ltd.
Siyakwamukela Shanghai Zetar
Alibaba Yethu Ye-Internet
Yaqalwa ngo-2005, futhi isekelwe khona lapha Shanghai China.At 2017, sisuke wavuza "China High Quality Umthengisi" umklomelo by Alibaba futhi eyaziwayo njengoba umholi okusheshayo-turn, zamanani aphansi China umjovo plastic udini, umjovo plastic tooling namasevisi okusheshayo prototyping.
2016 Zetar wathuthela esitolo 50,000-skwele okuyinto emhlabeni 35KM kude Shanghai Isiphothi futhi Pudong Airport. Manje Zetar has 6 onjiniyela senior, bonke babe eminyakeni engaphezu kuka-10 nakho ngepulasitiki umjovo udini umkhakha. Futhi ingxenye yabo Ungase futhi bakhuluma isiNgisi.
Sekuyiminyaka engaphezu kuka-13 eminyakeni, esizisebenzisayo esheshayo-phenduka umjovo plastic babumba futhi plastic umjovo isikhunta nezidingo izinkampani ezinkulu nezincane - kusukela Fortune 100 innovative ekuqaleni ups.We've isicelo ubuchwepheshe bethu ukuze ezibanzi izimboni, kuhlanganise nakwamanye amadivaysi ezokwelapha, yezimoto, ezempilo, electronics, impahla ukupakisha, ukwakhiwa impahla yasendlini, amathoyizi, ongaphandle ezemidlalo igiya nokuningi. Kungakhathaliseki yinkimbinkimbi umklamo wakho noma ubuningi oda lakho
Umjovo Izingxenye Okulolongwa, Umjovo Okulolongwa Plastic Isitsha, Injection Molding, Molding Ithuluzi Injection, Izingxenye plastic, Overmolding Injection Molding,